EVY's Kitchen: October 2014
Posted by Evy at 8:47 PM 1 comment:
ပြီးခဲ့ recipe မှာပါတဲ့ Sponge Finger ကိုအသုံးပြုပြီး Tiramisu Charlotte လေးလုပ်ကြည့်ကြရအောင်။ Charlotte ဆိုတာကတော့ အပြင်အခွံပါတဲ့ အချိုပွဲလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒီမုန့်အတွက်တော့ Tiramisu ကိုသုံးပြီး လုပ်ပြထားပါတယ်။ တကယ်တော့ Tiramisu ဆိုတဲ့ Itilian အချိုပွဲ့လေးကတော့ ကျွန်မတို့အများစုနဲ့ မစိမ်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်မုန့်နှစ်သက်သူတွေ သိကြမှာပါနော်။ ကော်ဖီ၊ Sponge layer နဲ့ ခရင်မ်ချိစ်များကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့မုန့် တစ်မျိုးပါပဲ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ (၇ လက်မ မုန့်တစ်ခုစာ)
ခရင်မ်ချိစ် ၁၅၀ ဂရမ်
Whipping cream ၁၅၀ ဂရမ် ( ခရင်မ်အဆင့်ရောက်အောင်မွှေထားပါ)
Gelatin powder – စားပွဲဇွန်း ၁ဇွန်း
သကြား ၅၀ ဂရမ်+ ရေ စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
Sponge finger - ၂ ဒါဇင်ခန့်
Expresso Coffee (သို့) ကော်ဖီအပြင်း ဖျော်ပြီးသား ၄၀၀ မီလီလီတာ
Coffee liquor - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း(နှစ်သက်ရာ liquor တစ်မျိုးမျိုးကို အစားထိုးနိုင်ပါသည်)
Gelatin နဲ့ရေကိုရောမွှေပေးပါ။ နောက်သကြားပါထပ်ထည့်ပြီး ပျော်အောင်အပူပေးထားပြီး လုံးဝအေးသည်အထိ အအေးခံထားပါ
ထို့နောက် ခရင်မ်ချိစ်ကိုလည်း ချောမွတ်လာအောင် မွှေတံလေးနဲ့ မွှေပြီးရင် သကြား+ Gelatin ရည်လောင်းထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပါ။
Whip လုပ်ထားတဲ့ ခရင်မ်ကိုလည်း ထည့်မွှေပေးပါ။ ဒါဆိုရင် cream cheese filling ရပါပြီ
Expresso Coffee နဲ့ Coffee liquour ကိုလည်းရောမွှေထားလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Tiramisu ပြင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
မုန့်ပြင်ရန်အတွက် ၇ လက်မအချင်းရှိ အောက်ခြေဖြုတ်လို့ရသော မုန့်ဗန်းကိုအသုံးပြုပါတယ်။ အရင်ဆုံး ပလစ်စတစ်အပါးလေးခင်းလိုက်ပါ။
နောက် sponge finger များနဲ့ ဗန်းပတ်လည်ကိုဖြည့်လိုက်ပါ။
Sponge fingerများ ကို coffee အရောထဲထည့်ပြီး coffee တွေစုပ်လာရင် ချက်ခြင်းဆယ်ကာ မျက်နှာပြင်အပြည့်ခင်းပေးပါ။
Sponge finger အလွှာပေါ်မှာ Cream Cheese filing ထပ်ခင်းပါ။ ဒီနည်းအတိုင်း Sponge finger အလွှာတလှည့် cream cheese တလှည့်ကုန်အောင်လုပ်သွားပါ။
အားလုံးကုန်ပြီဆိုရင် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အနည်းဆုံး ၄ နာရီခန့်ထားပြီးမှထုတ်စားပါ။
Posted by Evy at 11:45 AM 1 comment:
Sponge Cake ကို အခြေခံထားတဲ့ Sponge Fingers ဆိုတဲ့ မုန့်လုပ်နည်းလေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဒီမုန့်လေးကတော့ သူ့တစ်ခုတည်းစားရင်လည်း အဆင်ပြေသလို Tiramisu လိုမုန့်လုပ်ရင်လည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ကိတ်ခြောက်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူပြီး အထားလည်းခံတဲ့ အပြင်လုပ်နည်းကလည်း လွယ်ကူပါတယ်။
· ကိတ်ဂျုံ ၆၅ ဂရမ်
· ကြက်ဥအကာ ၃ လုံး + သကြား စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်း
· ကြက်ဥအနှစ် ၃ လုံး + သကြား စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
· Cream of tar tar - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၈ ပုံတစ်ပုံ
· Vanilla အနံ့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်
· Icing sugar အနည်းငယ်
1. ကြက်ဥအနှစ် နဲ့ သကြားစားပွဲတင် ၂ ဇွန်းကို စက်ဖြင့်ခေါက်ပေးပါ။ Vanilla အနံ့ကိုပါ ရောထည့်ပေးပါ။ မရိုးနိစ်အနေလောက် ရောက်ရင် ရပ်လိုက်ပြီး ကိတ်ဂျုံကို ခေါက်ထားသော ကြက်ဥအနှစ်ပေါ်မှာ ဇကာချပေးပါ။
2. နောက် ကြက်ဥအကာ နဲ့ သကြားစားပွဲတင်၃ ဇွန်းကို အမြုပ်ထအောင် ခေါက်ပါ။ cream of tar tar ရောထည့်ပြီး ဖြူပြီး ပွလာသည်အထိ စက်ဖြင့်ခေါက်ပါ။ Medium Peak အထိရောက်ရပါမယ်။
3. ရလာတဲ့ ကြက်ဥအကာ ၃ ပုံတစ်ပုံကို ခေါက်ထားသော ကြက်ဥနှစ်မှာ ရောမွှေပေးပါ။
4. နောက်ထပ်သုံးပုံတစ်ပုံကိုလည်း ရောထည့်ကာ သမအောင်မွှေပြီး နောက်ဆုံးကျန်သော ကြက်ဥအကာကို ထည့်ကာ လုံးဝ သမအောင်မွှေပါ။
5. ထို့နောက် မုန့်နှစ်များကို အိတ်တွင်ထည့်ကာ ၃ လက်မအရှည်ခန့်အချောင်းငယ်များရအောင် ဗန်းပေါ်မှာ ညှစ်ထည့်ထည့်ပါ။
6. ပေါင်ဒါသကြားဖြူးကာ ၁၈၀ ဒီဂရီ အပူပေးထားသော အာဗန်တွင် ၁၅ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ရင် ရပါပြီ။
Posted by Evy at 2:37 PM No comments:
Posted by Evy at 10:45 AM 1 comment: